Zvinorevei kufambidzana anobudirira zvinorevei? Mhinduro yomubvunzo uyu kunobva kwako. maonero upenyu uye zvinangwa zvamakaronga pachako kana kudanana. Kune avo vanoirima musi chiri kubudirira chete kana chiri pasuo kune shoko ukama refu uye kunyange muchato. Vamwe angafunga izvozvo njodzi kana haina vanoguma pamubhedha. For vamwe, mumwe musi kubudirira kana vaiva nenguva yakanaka. Kunyange hazvivimbisi kuti mazano anotevera vachachinja nerimwe zuva rive bhomba, dzichakunamatira kukubatsira kuderedza rako kufambidzana kukundikana zvazvingava.
Kujaira uchingotarisira kuti zvinangwa zvenyu
Sezvinongoita mimwe chirongwa imi vanobatanidzwa kupinda, uchingotarisira kubva munhu uri kufambidzana kana kubva musi pachayo inofanira akaderedzwa chinangwa chako. Kana uri kutsvaka mumwe-usiku chemwenje, regai ongorora mudiwa wako sokunge kuti uri kuenda kupedza vamwe hwako naye / her.
Ita pakusarudza kwako zvokufambidzana musarudzo
Kana uchida kuwedzera wako wokurarama, regai kudanana munhu sokuti kuwanikwa. Kubviswa ndandanda yemakambani Mikoko zvose vaya usina chinhu chisakachena.
A musi hakusi mukana kuratidza unyanzvi hwako chepanzvimbo. Kuita sezvingatarisirwa uye usaedza kuedzesera uri chimwe chinhu kupfuura iwe zvechokwadi, kunyanya kana muri kutsvaka ukama refu. Chokwadi achabva pakupedzisira uye umwe sokuti.
Anobudirira zvikuru misi mano, shaya hanya ndivo. Kana asina chinhu chokutanga zvachose bofu zuva, funga pamusoro wako zvakajairika nezvido uye mamwe mabasa nezvatinovavarira pfungwa kuti dzokubaya mose.
Regai kuuya kare munzvimbo kukurukura nguva dzose uye regai vachinyunyuta pamusoro wako vakakundikana ukama ive tsika. Kunyange zvazvo zvichikosha kuti vanhu vaviri vakaroorana vagoverane zvinhu dzavaigara, hapana anoda kuenzaniswa ane Genesi. Ramangwana riri kusimba nyaya uyewo. Regai muzoiisa kutoti wava nechokwadi chokuti mose iwe kufambidzana naye tagadzirira kuti nyaya yakadaro.
Pasinei vanhu vanoti, musi wokutanga nguva dzose nezvechitarisiko uye mukuru pfungwa. saka, ronga pachako maererano: kupfeka vamwe vanoumba, kupfeka chinhu kuti anotarisa zvakanaka pamusoro penyu uye kunyemwerera. zvisinei, havaregi kutarisira pachako kana uchifunga muukama.
Chengeta tsoka dzenyu pasi
Pasinei guru musi wako sokuti, vanoramba musoro. Regai kusvetukira pamubhedha, kanenge kwete nomusi wokutanga pamusi. Musatanga kutaura muchato uye vana nokuti unoda firimu chete.
Ungagadzirira nokuti zuva
gadziriro Date hachisanganisiri kungovimba kuva akachena, hwema zvakanaka uye akatarira ngwara. Kana vasina kudanana kwenguva refu, funga pamusoro nyaya yokukurukurirana kuitira kuti imi kudzivisa ngozi refu netsa Anonyaradza.
Enda mberi kuonekwa
Just nokuti vanhu kuva vakachenjera, akatendeseka uye kuroorwa, hazvirevi chaizvo. Pasina ridiculously suspecting zvose uye munhu wose, edza kusvibisa panze nhema uye kuunganidza mashoko zvakakwana kuitira kuti maonero.
Hazvinei nei imi muri kudanana Chiitiko, musava wakaora uye Usaita naro. Kudanana vose vakakupoteredza asingadi kuwedzera mikana yokuti ubudirire. Plus, uchava sokuti kunakidza kana uine imwe munzanga upenyu kunze kufambidzana.
A zuva rokutanga inogona kuva chitsauko ane rungano rokutanga, asi rinogonawo kuva zvachose njodzi ...